Talo bixin khabiir ah - "Nidaamka Baradhada" Magazine
Bogga guriga Madaxa Talobixin takhasus leh
Sii wadida mawduuca doorashada noocyada baradhada ee beerashada, waxaan kugula talineynaa inaad tixgeliso mabda'a qaada noocyada kala duwan. Shuruudaha ugu muhiimsan ee xulashada noocyo kala duwan ayaa ah joogitaanka ...
Lyudmila Dulskaya Xagaagii hore waxaa lagu xasuustaa masiibooyinka cimilada: gobollo badan oo ka mid ah bartamaha Ruushka iyo Ural ayaa wajahay abaar. Magaalada Krasnodar iyo...
Nidaamka bacriminta dalagga ee beeraha casriga ah, sida caadiga ah, waxaa ka mid ah hordhaca nafaqooyinka ugu muhiimsan - nitrogen, fosfooraska, potassium; ...
Bacriminta Bacriminta Foliar Plus - doorashada ugu fiican ee dalagga beerta
Quudinta caleenta waxay si adag u gashay tignoolajiyada beerashada dalagyada sida ugu dhaqsaha badan uguna waxtarka badan ee looga kabo yaraanta nafaqooyinka dhirta, ...
Shirkadda Swiss Omia waxay suuqa ruushka ku soo bandhigaysaa carrada granular carro-bacrimiyayaal ka samaysan micronized (dhul si fiican) budo ah karboonaydh dabiici ah oo la safeeyey.
Ekaterina Kudashkina, Musharaxa Sayniska Beeraha Khubarada waxay ugu yeeraan baradhada mid ka mid ah dalagyada ugu faa'iidada badan. Xiliga 2021, faa'iidada beerashada baradhada ayaa gaartay heer aad u...